Stadia ayaa marka hore bilaabi doonta Pixel 3, 3XL, 3a iyo 3a XL | Androidsis
Stadia ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii Maarso, Goobta ciyaarta qulqulka Google. In kasta oo ay ahayd inaan sugno dhowr bilood ilaa aan ka ogaanno dhammaan faahfaahinta ku saabsan. Maadaama ay ahayd khamiistii ay shirkadu na soo bandhigtay faahfaahinta ugu muhiimsan ee ku saabsan, sida qiimaheeda, ciyaaraha ay jiri doonaan ama shuruudaha. Laakiin waxaan sii wadnaa helidda xogta ku saabsan adeeggan shirkadda.
Hadda waan ognahay teleefoonnada ayaa ah kuwa ugu horreeya ee gala Stadia. War hore loo xaqiijiyay, hubaal in qofna lama filaan ku dhici doonin. Waxay noqon doontaa Google Pixel, labadii qarni ee ugu dambeeyay (Pixel 3 iyo 3 XL iyo 3aad iyo 3aad XL) oo marin u heli kara madalkan marka hore.
Waxay noqon doontaa bilowga xoogaa xaddidan, ugu yaraan kani waa qorshaha Google ee arrintan. Maadaama afartaan moodel ay noqon doonaan kuwa keliya ee galaangal u yeelan kara marka la bilaabayo. Laakiin waxaa la xaqiijiyay taageerada dambe ee taleefannada casriga ah ayaa lagu dari doonaa, si ay iyaguna marin ugu helaan Stadia.
In kasta oo hadda aannu waxba ka ogeyn kaas oo noqon doona taleefoonada heli kara taageerada la sheegay, ama goorta la bixin doono. Dareenkan, waa inaan sugnaa Google si uu na siiyo macluumaad ku saabsan. Laakiin shirkaddu ma sheegin goorta aan wax badan ogaan doonno.
Stadia waxaa shirkaddu u soo bandhigtay mashruuc hami leh. Qeyb sii kordheysa, oo xitaa Apple ay dooneyso sidoo kale la gal madal Arcade, kaas oo, sida Google, ay tahay in la bilaabo dayrta sannadkan. Haddaba labada shirkadood ayaa isku wajahaya aag cusub sidan.
Markaa waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko midka ay doorbidaan adeegsadayaashu. Markaan baranno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Stadia, way cadahay inay tahay mashruuc mustaqbalka ah oo shirkadda ah, kaas oo aan hubno inaan wax badan maqli doonno. Waxaan u dhug yeelan doonaa wararka cusub madal ama mobilada la jaan qaadi doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Stadia waxaa laga heli doonaa Pixel 3, 3 XL, 3a iyo 3a XL markii la bilaabay
Fold Galaxy wuxuu leeyahay taariikh cusub oo la sii daayo